Fedora သည် GNU / Linux ရှိလမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြုပြင်ချင်သည် Linux မှ
Fedora သည် GNU / Linux ရှိလမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြုပြင်ချင်သည်
Fedora ၏ file system များကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် Linux ဖြန့်ဝေမှုများ။ ဒီဟာကအသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ စိတ်ကူး ၎င်းသည်မကြာမီကတည်ရှိခဲ့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်၎င်းသည်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အရာအားလုံးကိုရွေ့လျားခြင်းအပေါ်အခြေခံသည် / usrဆိုလိုသည်မှာ system ၏ binaries အားလုံးသည်ဖြစ်လိမ့်မည် / usr / binအတွက်စာအုပ်ဆိုင် / usr / lib (32-bits သည်) နှင့်၌တည်၏ / usr / lib64 (၆၄-bit)
"view" အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံကအများကြီးမပြောင်းလဲဘူး၊ ဆိုလိုတာက ... မှန်ပါတယ်၊ binaries တွေက NO မဟုတ်တော့ဘူး / bin မရှိရင် / usr / bin, ဒါပေမယ့်ကနေသင်္ကေတ link ကိုရှိပါလိမ့်မယ် / usr / bina/ binဒါဆိုငါတို့စနစ်မှာဘာမှမပြောင်းဘူးလို့ထင်ရလိမ့်မယ်။
သိသာထင်ရှားတဲ့အပြောင်းအလဲ၊ စိတ်ကူး၊ အကြံပြုချက်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ခေါ်ချင်တဲ့အရာအားလုံးသူတို့က RPM distros များအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ Fedora ငါအသံတွေအများကြီးရှိသည်နှင့်တူသော distros အတွက်မဲပေး debian ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ? 😀
လက်ရှိတွင်တည်ရှိလွန်းသောများစွာသော directory များရှိသည် /, ဒါ Harald y ကေးပိုက်ဆံအိတ် (၏ developer နှစ် ဦး စလုံး ဦးထုပ်နီကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်အတွင်းပိုမိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်ဤအဆိုပြုချက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည် / bin y / sbinနှင့်အသစ်သောအသစ်များအတွက်ဤ Linux လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည့်အခြားအပြောင်းအလဲများ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အရသိရသည် Lennart ကဗျာဆရာ (စတီထွင်သူ၏ ဦးထုပ်နီ), စနစ်စာကြည့်တိုက်များ၏တည်နေရာကိုဤအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ခြင်းသည်လျှောက်လွှာများ၏တင်ပို့နှုန်းကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ပိုမိုရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်တူညီသောစာကြည့်တိုက်ကိုအသုံးပြုသောနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော application များကိုစတင်ခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူသောအလုပ်ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ဤပြproblemsနာများရှိပုံမပေါ်ပါ။ အသေးစိတ်မှာအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ပါက၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည် FHS (ဖွဲ့စည်းပုံစံဖိုင်) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ distros ပေါ်မှာ, ဖိုင်စနစ်အဆင့်ဆင့်အပေါ်အခြေခံပြီးတဲ့စံ Unix က v7 နှင့် Solaris.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည်လုံးဝဆန့်ကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်လုံးဝမျက်နှာသာပေးခြင်းမခံရပါ။ ဟုတ်သည်ဟုထင်ပါသည်။ / bin, / usr / bin, / sbin, / usr / sbinနှင့်အခြားနေရာများအတွက်လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးအနည်းဆုံးငါ့ကိုအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေး ^ _ ^
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Fedora သည် GNU / Linux ရှိလမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြုပြင်ချင်သည်
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသည်ဤအမျိုးအစားများစွာကိုအပြောင်းအလဲများကိုမြင်ချင်ပါတယ်။ GNU / Linux ရှိဖိုင်စနစ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာတည်ဆောက်ရန်စိတ်မထိခိုက်ပါ။ / mnt / sbin ကဲ့သို့သောလမ်းညွှန်များရှိသည်။
ငါအခြားအရာတစ်ခုခုကိုအဆိုပြုလိမ့်မယ်။ ဖိုင်စနစ်ကိုမပြောင်းဘဲသိုဝှက်။ ဖုံးထားပါ၊ အသုံးပြုသူ / home / usr / သာမြင်နိုင်သောအရာ
Fedora မှာအသံများများစားစားမရှိ၊ Debian ကဲ့သို့သောအရာဝတ္ထုများကိုလည်းမဲပေးကြသည်မဟုတ်လား။
အဲဒီမှာမှားနေတယ်၊ ​​GNU / Linux ပြောင်းလဲမှုအများစုဟာ Fedora / RedHat ကလာတယ်
ရဲဘော်ရဲဘက် Eduar2 ပြောသလိုသဲတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ပေါက်ကွဲသံကြီး
စကားမစပ်၊ တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်သည်အလားတူထင်မြင်ချက်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသင်ကကျွန်ုပ်အားဤသို့ပြောသူ၊ ယခုသင် haha ​​ဟုပြောသောသာမန်အသုံးပြုသူဟုသင်ပြောခဲ့သည်။
KZKG ^ Gaara <Linux ကို° ဟုသူကပြောသည်
ဆိုလိုတာက Fedora / RedHat က X အပြောင်းအလဲကိုအဆိုတင်သွင်းနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Debian (နှင့် derivatives)၊ Gentoo, Slackware, Arch စသည်ဖြင့်အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကဒီအပြောင်းအလဲကိုအသုံးမပြု / လက်ခံစရာမလိုဘူး။
KZKG ^ Gaara <° Linux သို့ပြန်ပြောပါ
အိမ် - အသုံးပြုသူများအတွက်
sis - စနစ်တစ်ခုလုံး၊ configurations စသည်တို့…
အဓိက "distros" (အထူးသဖြင့်အခြေစိုက်စခန်းများ၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သော) ကိုတီထွင်သူများကဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
packages များ၊ ဗားရှင်းများ၊ စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများ၊ မျက်နှာပြင်များ၊ လိုင်စင်များစသဖြင့်အခြားအရာများဖြစ်သော distro တစ်ခုချင်းစီသည်၎င်းင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချသည့်အရာများ၌၎င်း၊ Linux developer များ။
Ignatius Stoppani ဟုသူကပြောသည်
ဒီ distro သိလား ငါဖိုင်ရှိပြီးသားကွဲပြားတဲ့ဖိုင်တည်ဆောက်ပုံကိုတွေ့မြင်နေစဉ် - System - App ဖိုင်များ - ယာယီ - သုံးစွဲသူများ - Volumes
Ignacio Stoppani ကိုပြန်သွားပါ
ဘာ distro ဆိုလိုတာလဲ 😕
hehe, စိတ်မကောင်းပါဘူး, Distro ကို Moon os လို့ခေါ်တယ်။ မနေ့ကငါရေးတုန်းကငါအရမ်းအိပ်ပျော်နေပြီဆိုတာမင်းသိနိုင်တယ်။ ရွှင်လန်း!
Hahahaha Nacho ကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေ၊
UDS မှစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များ (Ubuntu Developer Summit)